Umaka: y | Martech Zone
I-YouTube: Lithini Isu Lakho Levidiyo Lapho?
NgeSonto, ngoJulayi 16, i-2017 NgeSonto, ngoJulayi 16, i-2017 Douglas Karr
Sihlala sigxile ezikhaleni uma kukhulunywa ngamasu wokumaketha edijithali wamakhasimende ethu. Izinjini zokusesha akusona nje isiteshi samabhizinisi nabathengi sokuthola imikhiqizo abayifunayo, ama-algorithms nawo ayinkomba evelele yegunya lomkhiqizo online. Njengoba sihlaziya okuqukethwe okugxila kulo mkhiqizo, siqhathanisa okuqukethwe kusayithi lomncintiswano ngamunye ukubona ukuthi yini umehluko. Kaningi, omunye walabo abahlukanisi unjalo